IPhone ayaa ku koobnayn dhisay-in ringtones, kuwaas oo intooda badan isagoo qiimo yar in dadka isticmaala ay. Nasiib wanaag, waxa jira siyaabo badan oo aad isticmaali si aad u hesho ringtones lacag la'aan ah si aad u iPhone. Habka koowaad waa in ay soo bixi ringtones free galay your computer ka dibna iyaga lagu wareejiyo si aad iPhone. Habka labaad waa in la isticmaalo app a free ringtone diyaar u download ee internet-ka. Habka saddexaad waa in la isticmaalo barnaamijyadooda gaare ringtone lacag la'aan ah oo loogu talagalay qalabka iPhone. Habka liiska hore, laakiin ma aha in la sameeyo ringtones in Lugood, ka dibna iyaga ku wareejiyo si aad iPhone. Ha isku buuqo halkan; Waxaan kuu sharxi doonaa siyaabo in faahfaahinta.
Inta aynaan guda galin raadinta ringtone ugu fiican ee aad iPhone, marka hore waa in aad fahamto taageero file qaab aad ringtones iPhone. IPhone wuxuu taageeraa oo kaliya ringtones la M4R files kordhin kuwa. Waxaad ka heli doontaa in inta badan ringtones ah in dadka soo bixi internet-ka ka leeyihiin kordhin file MP3. Sidaa darteed, waa in aad loogu badalo file MP3 ringtone kordhin galay file .m4r kordhiyo si ay u isticmaalaan in aad iPhone.
Habka 1: Download ringtones free on kombiyuutarada iyo wareejiyo iPhone
Habka 2: Free barnaamijyadooda ringtone
Habka 3: Free barnaamijyadooda gaare ringtone u iPhone
Habka 4: ringtones Kan sameeyey on Lugood iyo wareejiyo iPhone
Talaabada 1: Tag this site iyo dhirta iyada oo qaybaha si ay u doortaan ringtone ugu fiican inaad kala soo baxdo si aad u iPhone.
Talaabada 2: Waxaad heli doontaa fursado badan ringtone u download, kaliya dooro guji mid ka mid ah si aad u bilowdo nidaamka of download.
Tallaabo 3: Ka dib markii gujinaya aad ringtone la doonayo, waxaad la faray doonaa si ikhtiyaar kale oo guji badhanka 'Ringtone Hel'.
Talaabada 4: Riix badhanka download si ay u bilaabaan soo degsado
Talaabada 5: Ka dib markii riixaya badhanka download, zedge ku weydiin doonaa inaad geli magacaaga iyo isgarad. Ma aha diiwaan-gelinaya, laakiin wax kasta oo magacaaga iyo isgarad-aad doorato. Your ringtone bilaabi doonaan in ay soo bixi isla markiiba kadib markii ay galeen sirta. Save faylka dhameystirtay galay your computer.
Talaabada 6: taageerada iPhone kaliya ringtones la M4R files kordhin kuwa. Zedge leeyihiin ringtones la kordhin file MP3. Sidaa darteed, waa in aad loogu badalo file MP3 ringtone kordhin galay file .m4r kordhiyo si ay u isticmaalaan in aad iPhone. Wondershare Video Converter Ultimate iyo Zamzar noqon kartaa kaalmo weyn in this.
Waxaad ka your computer awoodi karaa inuu wareejiyo ringtones bixi in aad iPhone isticmaalka Lugood ama aan lahayn isticmaalka Lugood.
Waxaad ka heli kartaa ringtones lacag la'aan ah iPhone adigoo isticmaalaya Chine oo lacag la'aan ah. Kuwani Chine oo lacag la'aan ah u oggolaadaan dadka isticmaala si ay u abuuraan iPhone ringtones maktabadda Lugood. Dhibaatada kaliya barnaamijyadooda lacag la'aan ah ay leeyihiin waa in ay qaar ka mid ah leeyihiin way adag tahay in ay ku shaqeeyaan interfaces. Waa in aad ogaataa in xataa haddii laga daadiyo waa bilaash in la isticmaalo, users weli u baahan yihiin in ay isticmaalaan lacag si ay uga soo bixi ringtones ka Lugood. Dhab ahaantii waxaan haysanaa kun oo Chine ringtone lacag la'aan ah laga heli karo internet-ka u download. Waxaan doonayaa inaan ku qor kaliya ahaa saddexda ugu sareeya iyo qeexo in aad sida aad u heli ringtones lacag la'aan ah marka la isticmaalayo barnaamijyadooda kuwa.
App waxa uu leeyahay ringtones dhisay iyo adeegyada radio free. Waxaa isticmaala siinaysaa fursad in la shakhsiyeeyo waxaa iPhone la ringtones bixi iyo kartoo. Waxa kale oo aad la shakhsiyeeyo karaa idaacada marka la isticmaalayo app this by doorashada heeso aad jeceshahay ama artist. App waxay u baahan macruufka 6.0 ama ka dib. Waxaa la socon kara iPod taabashada iyo iPhone, iPad, laakiin filaayo in iPhone 5.
Iyadoo ZEDGE waxaad ka heli kartaa ringtones aan xad lahayn si aad u iPhone. Waxay bixisaa ringtones aan xad lahayn, dhawaaqa gaadhsiin, codadka fariin iyo dhawaaqa digtoonaanta. App Tani waa la jaan qaada iPhone 5, iPhone 5s, 5c iPhone iyo macruufka 6 ama ka dib. Waxay leedahay deg deg ah si ay u helaan interface ka soo jeeda ku habboon screen qufulka iyo daaha guriga. Qaababka kale oo ka mid rajeenayo in UI, shil oo la rajeenayo in qaab iyo iOS7 style keyboard.
Tani waa app in aad bixisaa 1500 ringtone aan xad lahayn oo lacag la'aan ah si aad u iPhone. Waxaad la shakhsiyeeyo kartaa iPhone ringtones, fariin ama alarm la midab aad ugu jeceshahay. Waxay leedahay qaybaha aan xad lahayn oo ay ku jiraan nasashada ee codadka, codadka lagu qoslo, codad, hoonka deg deg ah, qarax, kulan video, codadka guud iyo qaar badan. Marka laga reebo soo degsado midab aad jeceshahay, waxay ku siinaysaa fursad aad ku saaxiibadaa iyo qoysaska wadaagaan ringtones kuwa aad.
Kuwaas oo lacag la'aan ah barnaamijyadooda gaare ringtone kaa caawinaysaa in aad si loogu badalo aad heeso galay 30 ringtones labaad oo iyaga lagu wareejiyo si aad iPhone. Marka hore aad waa inuu xaqiijiyaa in ringtones in aad wareejiso leeyihiin dheeraad ah .m4r taas oo kordhin file aqoonsan iPhone ah. Waxaa jira tiro fara badan oo Chine gaare ringtone lacag la'aan ah internet-ka. Kaliya ku socdaan waxaan qabaa inay taxaan seddex ka mid ah oo kuu sharaxo sida aad u heli karto ringtones free la daadiyo kuwa siday u kala horreeyaan.
Waxaad samayn kartaa ringtones aan xad lahayn oo ka maktabadda ama record dhawaaqa iPhone iyo iyaga diinta ringtones isticmaalaya makarafoonka hidi. Iyadoo app this waxaad samayn kartaa ringtones ilaa 40 ilbiriqsi oo dherer ah. Waxay leedahay baxeysa ka soo baxay oo ka baxeysa ee codad. Waxay leedahay palette indhuhu u ah siinaya dadka isticmaala waayo-aragnimo user u fiican.
Iyadoo app this, waxaad isticmaali kartaa heeso ee maktabadda music iPhone aad si ay u abuuraan ringtones. Waxay kaa caawin karaan inaad u astaysto Tweet midab, midab Text, midab Alert, midab Calendar, Mail midab iyo jawiga Xusuusin. Qaababka ugu muhiimsan ee app waxaa ka mid ah in ka baxeysa iyo libdhi baxay saamayn dhawaaqa, markii ay gacanta ku bilaabatay si fudud, iyo quickness in duubo codka iyo ringtone tafatirka. Abuure ringtone Tani waxay u baahan iPhone macruufka 4 iyo 3GS ama ka dib.
Iyada oo la abuuro Ringtones ringtone gaare, waxaad samayn kartaa codadka ee ringtones caado waqti aad u gaaban gudahood. Waxaad isticmaali kartaa iPhone maktabadda music heeso si ay u abuuraan ringtones. Waxaa loo qorsheeyay iyadoo gacanta ku horumarsan sida libdhi ee waxay u engegi doonaan Out saamayn dhawaaqa, interfaces qurux badan oo gacanta ku markii bilowgii wax ku ool ah.
Si fudud Waxaad samayn kartaa ringtones on Lugood iyo wareejiyo si aad iPhone. Aynu idinku waad gabyi in your computer in aad dooneyso inaad sida ringtone, heegan SMS ama alarm, waxaad si fudud u bedeli karaan this song on Lugood oo wareejin iPhone sida ringtone ah. Habkan waa mid aad u sahlan, sida inaad ku gaadhaan danihiina ka tilmaan hoose.
Talaabada 1: My diiradda noqon doonaa sida loo isticmaalo qayb ka mid ah hees ku kaydsan your computer si ay u sameeyaan ringtone ah marka aad isticmaalayso Lugood. Tag your computer iyo abuurtaan codsigaaga Lugood. Dooro song ka your computer oo dajiyaan in codsiga Lugood in aad furay. Waxaad ku samayn kartaa adigoo gujinaya xaq file iyo doorashada in la furo la Lugood.
Talaabada 2: Dooro song in aad rabto in aad isticmaasho sida ringtone
Talaabada 3: Xuquuqda guji song iyo doorto ikhtiyaarka 'Hel Info'
Talaabada 4: Dooro tab ikhtiyaarka
Talaabada 5: haggaaji waqtiga stop iyo markii bilowgii aad ringtone ah. Tani waxay kuu ogolaaneysaa in aad doorato qaybta song in aad rabto in aad si loogu badalo galay ringtone ah. Lugood ogolaan doonaa oo keliya in aad dooro ringtones in ay yihiin 30 seconds dheer ama ka yar. Markaasuu u tag tallaabada xigta adigoo gujinaya OK.
Talaabada 6: Kala qayb ka ah in aad soo xulay file asalka. Waxaad ku samayn kartaa adigoo gujinaya xaq file mar kale iyo doorashada ikhtiyaarka Abuur version ACC. Tani doonaa song asalka noqon laba koobi, ka gaaban hal iyo hal dheer. Naqilkeedii ayaa gaaban waa ringtone.
Tallaabo 7: Markaasuu u tag song gaaban oo xaq guji ku yaal. Haddii aad isticmaalayso Mac, dooro "Show in Finder." Ikhtiyaarka Haddii aad isticmaalayso daaqadaha, dooro "Show in Windows Explorer." Ikhtiyaarka Daaqad cusub oo ka kooban labada song asalka iyo ringtone ka badaley soo muuqan doonaa.
Tallaabo 8: beddel kordhin file aad ringtone ka .m4a in .m4r file. Haddii aad isticmaalayso daaqadaha xaq guji ringtone ka dooro 'Magaca.' Haddii aad tahay user Mac ah, hoos u qaban button Shift oo guji heesta. Riix HAA in magaca faylka.
Tallaabo 9: Delete version ACC in idinka abuuray Lugood. Delete faylka gaaban gabayga oo ka Lugood.
Tallaabada 10: Si aad u dajiyaan ringtone in ay Lugood, double-guji file .m4r furmo Finder ah
Tallaabada 11: Si aad u heshid faylka .m4r ah, guji metrik in bar-bidix ee Lugood ah. Si aad faylka wareejiyo galay aad iPhone, waxaa Jaximo folder telefoonka aad doorbiday. Ikhtiyaar kale ee wareejinta this file .m4r waa in ay email faylka si aad iPhone.
> Resource > iPhone > Sida lagu Helo Free Ringtones u iPhone